कहाँ कहाँ छ कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण ? — Fair Nepal
फेयर नेपाल January 23, 2020	No Comments Corona Virusकोरोनाभाइरस
काठमाडाैँ । चीनका अधिकारीहरूले मानिसहरूलाई वुहान शहरतर्फ र त्यहाँबाट बाहिर यात्रा नगर्न आह्वान गरेका छन्।वुहान पछिल्लो भाइरसको सङ्क्रमणको केन्द्रमा रहेको चिनियाँ शहर हो। सो भाइरसका कारण हालसम्म नौ जनाको ज्यान गएको बताइएको छ।
झन्डै नब्बे लाख जनसङ्ख्या भएको वुहानका बासिन्दालाई भिडभाडमा नजान र सार्वजनिक जमघट कम गर्न भनिएको छ। उक्त कोरोनाभाइरस वुहानबाट अन्य चिनियाँ प्रान्तहरू एवम् संयुक्त राज्य अमेरिका, थाइल्याण्ड र कोरियामा समेत फैलिएको छ। नयाँ खाले भाइरसबाट सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या ४४० पुगेको पुष्टि भएको बीबीसीले जनाएकाे छ ।
अधिकारीहरूले चीन उक्त भाइरस सङ्क्रमणको रोकथाम र नियन्त्रणको “सबैभन्दा संवेदनशील चरणमा” रहेको स्वीकार गरेका छन्। यसै हप्ता चीनले उक्त भाइरस मानिसबाट मानिसमा सरेको पुष्टि गरेको थियो।
वैज्ञानिक भाषामा २०१९-एन सीओभी भनिएको उक्त भाइरस कोरोनाभाइरस वर्गको नयाँ प्रजाति भएको ठानिएको छ, जुन यसअघि मानिसमा फेला परेको थिएन। सन् २००० को दशकको आरम्भतिर संसारभरी झन्डै ८०० मानिसको ज्यान लिएको सार्स भाइरस पनि एक प्रकारको कोरोनाभाइरस नै थियो।
नयाँ भाइरस सङ्क्रमणको सङ्केतहरूमा श्वासप्रश्वाससम्बन्धी लक्षण, ज्वरो, खोकी, श्वास नपुग्ने र श्वास फेर्न कठिनाइ हुने लगायतका पर्दछन्।
भाइरस कति छिटो फैलँदै छ?
यो बारेमा यसै हो भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन तर चिनियाँ नयाँ वर्षको एक हप्ता लामो छुट्टी मनाउन चीनभित्र करोडौँ मानिसहरू एक ठाउँबाट अर्कोमा यात्रा गरिरहँदा अवस्था चर्कन सक्छ।
हजारौँ चिनियाँहरू विदेश यात्रामा पनि छन्। चिनियाँ अधिकारीहरूले रोगको सङ्क्रमण फैलन नदिन कडा उपायहरू अपनाइएको बताएका छन्। त्यस्ता उपायमा वुहानबाट बाहिरिने सबैको ज्वरो मापन गर्ने र सार्वजनिक परिवहनका ठूला केन्द्रहरूमा निर्मलीकरण र उचित हावा प्रवाहको व्यवस्था गर्ने छन्।
वुहानमा जीवित पक्षी र जङ्गली जनावरको व्यापारमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। र त्यस्तो प्रतिबन्धको पालना भए नभएको जाँच्न प्रहरीले बजारहरूमा छड्के कारबाही गरिरहेको छ। वुहानका नगरप्रमुखले अत्यावश्यक कारणले बाहेक उक्त शहरको भ्रमण नगर्न मानिसहरूलाई आह्वान गरेका छन्।
कहाँ कहाँ भाइरसको सङ्क्रमण छ?
यो नयाँ भाइरस चीनबाहेक अन्य केही स्थानमा पनि देखिएको छ। थाइल्याण्डमा तीनवटा घटना फेला परेको छ भने दक्षिण कोरिया, जापान, ताइवान र अमेरिकामा एक-एक घटना देखिएको छ।
अस्ट्रेलिया, सिङ्गापुर, हङ्‍कङ, ताइवान, अमेरिका, रुस र जापानमा अधिकारीहरूले वुहानबाट आउने यात्रुहरूको परीक्षणमा कडाइ अपनाएका छन्। लण्डनस्थित हिथ्रो विमानस्थलमा पनि वुहानबाट आउने यात्रुहरूको परीक्षण आरम्भ गरिएको छ।
के तथ्याङ्कहरू सहि छन्?
विज्ञहरू भन्छन् उक्त भाइरस सङ्क्रमण भएको तर फेला नपारिएका घटनाहरू धेरै हुन सक्छन्। इम्पिरिअल कलेज लण्डनको सङ्क्रामक रोग विश्लेषण एकाइको अनुमानमा संसारभरि १,७०० जना उक्त भाइरसबाट सङ्क्रमित भइसकेका छन्।
तर चीनको रोग नियन्त्रण केन्द्रका अधिकारी भन्छन् सो ब्रिटिश अनुसन्धान संस्थाको त्यस्तो अनुमान “वास्तविकतामा जे देखिएको छ त्योसँग मेल नखाने प्रकारको” हो।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन डब्लुएचओले स्वाइन फ्लु र इबोला सङ्क्रमणका बेलामा जस्तै उक्त नयाँ भाइरस सङ्क्रमणको सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य सङ्कटकालको घोषणा गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा बुधवार छलफल गर्दैछ। यदि त्यस्तो घोषणा गरिएमा त्यसलाई भाइरस सङ्क्रमणविरुद्ध सुसंयोजित अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रियाका लागि भएको आह्वानका रूपमा लिइने छ।
Previous Previous post: राष्ट्रियसभाको निर्वाचन अपराह्न चार बजेसम्म, आजै परिणाम आउने
Next Next post: बागमतीमा भाेलि सार्वजनिक बिदा